अमेरिकामा भेटिए 'कन्दरा ब्याण्ड' का विवेक श्रेष्ठ
मोहनराज बराल टेक्सास
उनी हँसिलो मुस्कान लिएर अमेरिकाको ड्यालसमा रहेको डिएफडब्लु अन्तष्ट्रय विमान स्थलबाट कारमा हुईकिदै आए। हामी उनैलाईकुरिरहेका थियौ। साधारण पहिरनमा सजिएका, सधै हँसिलो मुस्कान रहिरहने, उमेरले चार दशक नजिकै रहदा पनि उस्तै हेण्डसम उनिगायक थिए। पचासको दशकका लोक पप क्षेत्रका एक हस्ती उनि थिए गायक विवेक श्रेष्ठ।
कन्दरा आज भन्दा २४ बर्ष अधि पोखरामा स्थापना भएको एउटा प्रख्यात लोकपप ब्याण्ड हो। उनि यहि ब्याण्डकै गायक परे। उनीकोआगमन पश्चात हामी लगातार गफियौ। पत्रकार अमित अभय अधिकारीले प्रश्नहरु तेर्साईरहे। लाग्छ हामी हाम्रो शरीरलाई सात समुन्द्रपारमुग्लानमा राखेर केवल पोखरा तिर फर्किएका थियौ। सम्झिए स्कुल लाईफ।
पोखराको बाराही स्कुलका पढदाका साथी सुनिल थापासँगबिताएका ति दिनहरू। स्कुल पढ्ने क्रममा सुनिल टेबल बजाउँथे, विवेक गीत गुनगुनाउँथे। उमेर १३ वर्षको उमेरमा साथी सुनील थापाको शब्दसंगीत रहेको 'आजभोलि रात’ गीतमा आवाज दिएर गायक बन्ने सुरमा हिडे।
समय त्यहि नि हुदो हो।कला र संगीतमा रुचि राख्ने युवाहरूले गठन गरेको पिस ह्यान्की क्लबमा तीन बर्षसम्म आबद्ध रहे। विश्व संगीतमा रकगीतहरूको दबदबा रहेको त्यो बेलाको समय। निरभाना, यामयालटिआर, बनजोभी, ईगल्स आदी ब्याण्हरूका गीतहरू सुनेर हुर्केको त्यहीसमयमै पिस ह्यान्की समूहमा पनि यसको प्रभाव थियो नै।
यसमा रहेका रक शैलीका गीत मन पराउनेहरूले ‘२४ क्यारेट’ रक ब्यान्ड स्थापनागरे, जसमा बुद्धराज बर्जाचार्य, विजय गुरुङ, दीपकराज मुल्मी, आनन्द तजिया तथा सुनिल भट्टचन आबद्ध थिए। कालन्तरमा रक ब्यान्ड २४ क्यारेट नै कन्दरा समूहका रूपमा चिनिन पुग्यो। यसरी पिस ह्यान्की हुदै कन्दरा ब्याण्डसम्म आईपुग्दा आफूमात्र होइन सुनिल थापा र अमर गुरुङलाई समेत ल्याए।
पश्चिमी संगीतको प्रभाव रहेर पनि नयाँ टेष्टका रूपमा आफ्नै गाँउ, वेसी, कुना र कन्दराका मैलिक शब्दहरूलाई आत्मसाथ गर्दै लोकपपलाईप्रयोग गरेर सन १९९४ मा पहिलो एल्बको रूपमा ‘चञ्चले कान्छी’ सार्वजनिक गरेपछि दर्शक श्रोताले निकै रुचाए यो टेष्टलाई। यहि टेष्टलाईपछ्याउदै सन १९९६ मा ‘डाँडापारि’ र सन १९९८ मा ‘हङकङ पोखरा’ लगायतका एल्बमले यो समूहको चर्चा अझै चुलायो।
समूहको लोकप्रियता यति चुलियो की यो समुहलाई देश विदेशमा कन्सर्ट गर्ने भ्याईनभ्याई हुन थाल्यो। लोकपप मात्रै हैन मेलोडी गायनमापनि उत्तिकै सशक्त रूपमा प्रस्तुति दिने यिनीले सन २००१ मा सोलो एल्बम ‘उत्सव’ले उनको आधुनिक गायन तर्फ झनै उचाइ बढाएकोथियो।
हरिशरण लामाछानेको शब्द रहेको टाईटल गीत उत्सव हिट भएको थियो भने गीतकार तीर्थ तामाङको शब्द रहेको गीत म आफै घमिलोकहाँ थिए र! भन्ने गीतले आधुनिक गीत सुन्ने स्रोताहरूको अत्याधिक मन जितेको थियो। कन्सर्टको उच्च माग रहेकै समय एवम लोकपपमा हिट भईरहदा र आधुनिक गायनको क्षेत्रमा पनि तहल्का पिटदै गर्दा आफ्ना दर्शक शुभचिन्तक एवम स्रोताहरूबाट टाढा रहे।
विदेशिएर गईन उनि मलाई छोडेर
तर रून आँशु बाँकी छैन अब केही
हाँसो भन्ने भाग्यमा नै छैन भन्ने ‘डाँडापारि’ एल्बमको रहेको माथिका गीतका अंशहरू झै भए फ्यानहरु पनि त्यसबेलामा। फेरि समय पनि उस्तै थियो सोसल सेक्यरेटी नभएको वेला थियो। देशमा व्याप्त द्वन्द भईरहेको थियो। संगीतबाट हात मुख जोर्न विस्तारै कठिनहुदै गईरहेको समय।संगीतमा लागेकाहरू विदेशतिर पलायन हुदै गएको समय। उनी पनि पारिवारिक कारणले विदेश पलायन हुन बाध्य भए।
भनिन्छ पोखरालाई कला, साहित्य र संगीतको राजधानी।आखिर उनी पनि परे पोख्रेली। फेरी बुबा पनि पोखराकै साहित्यकार बिण्णुअल्पबिराम। मुग्लानमा पनि संगितको नशाले छोडेन। एक पटक गायक बब मार्लीले भनेका थिए संगितको बारेमा एउटा राम्रो तथ्य के हो भने जब यसले हान्छ तब केही पिडा हुदैन।
उनीलाई पनि परदेशमा संगीतले हान्न थाल्यो। नेपालको सेलिब्रिटी तर परदेशमा शुन्यदेखिको स्टगलजीन्दगी। कस्तो हुदो हो! आफैले आफुलाई चिनेको बताए। सायद उनीलाई डिप्रेशनबाट जोगाउने चीज संगीत नै थियो। उनि कत्ति पनि हरेसखाएनन बरू त्यो बेलामा हरेस खाएकाहरूलाई संगीतको माध्यमबाट स्टगल गर्न हौसला दिन्थे। यो पंक्तिकारले सन २००९ ताका लण्डनको वूल्चीचमा आफु पढने कलेजमा यि गायककै कन्सर्ट हेर्ने मौकामा यि कुराहरू पाएको थियो। संगीत क्षेत्रका साथीहरूसँग भौगोलिक रूपमाटाढा रहेपनि मनदेखि टाढा कहिल्य पनि रहेनन। बरू यसरी मुग्लानको रूपमा वेलायतमा रहदा विभिन्न भागहरूमा सांगेतिक टुरहरू गरिरहे।
सन २०१२ मा वेलायतको विभिन्न भागहरूमा अग्रज सष्टाहरूको सम्मान स्वरूप उनीहरूको सदाबहार गीतहरुलाई नेपाली डायस्पोरामासंग्स फरईभर लाईभ म्युजिकल टूर २०१२ मार्फत गुन्जाउने काम गरे। यस अभियानमा वेलायतमै संगीतमा कृयाशिल साथीहरूको साथमाभव्यताका साथ सम्पन्न गरे।
यो कार्यक्रम नेपाली डायस्पोरामा अत्यन्तै बेग्लै शैली र नितान्त सांगितिक, व्यवस्थित र फरक ढंगले गरिएको सांगितिक साँझ थियो। हेल्पनेपाल नेटवर्क यू.के. को सहयोगार्थ गरिएको यस सांगीतिक यात्राले गायक श्रेष्ठलाई उनी संगीतबाट टाढा छैनन। प्रवासमा रहेर पनि संगीतसृजना पनि गरिरहेका छन भन्ने संन्देश प्रवाह गरयो। यसो त उनी त्यो बर्ष ब्रिटेन स्थित नेपाली समुदायलाई योगदान पुरयाउने दशजनाव्यक्तित्वहरु मध्ये एकमा उनी पनि थिए।
कुनै समय यस्तो पनि थियो कि कन्दरा समुह नेपथ्य समुह भन्दा पनि चर्चित थियो तर अहिले समय बदलिएको छ। सन २०१३ अगष्ट ३ तारिखको दिन वेलायतको प्रसिद्ध वेम्ब्ली एरिनामा नेपथ्य समुहको कन्सर्टमा दर्शकको रूपमा रहेका उनीलाई यो दिन आफुलाई गर्व लागेकोदिन मान्छन भने यस दिनले नेपाली संगीतको क्षेत्रमा ईतिहास रचेको दिन मान्छन्।
यसो त मुख्य गायक नै विदेश गएपछि यो समूहले निरन्तर एल्बम निकाल्न सकेन। तर पनि विदेश रहदै गर्दा सात वर्षको अन्तरालमा सन २००६ मा चौथो एल्बम ‘वर्षौं पछि’ सार्वजनिक भएको थियो।यस एल्बमबाट कवि विनोद गौचनको शब्द रहेको गीत तगारोमा रूमाल राखीबाटो छेक्यौ तिम्ले भन्ने गीत चर्चित भयो।
फेरि सन २०१५ मा समूहको पाँचौं एल्बम भेडीगोठमै बजारमा आए सँगै गायक स्वदेशमै संगीतकर्ममा लागिरहेका छन। यसो त उनीलाई यसक्षेत्रमा फर्काउन परिवार र साथीभाईहरूको हौसला र साथ मिलेको छ। अहिले कन्दरालेविदेशमा सांगीतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने निम्तो पाउन थालेको छ भने पछिल्लो समय हङकङ,दक्षिण कोरिया, मलेशिया तथा अष्ट्रेलियालगायतका देशहरूमा लाइभ कन्सर्ट प्रस्तुत गरेको यो समुह करिब १ दशक पछि सांगितिक रुपमा पुन सक्रिय हुदै गर्दा प्रशंसकहरुको क्रेजउस्तै रहेको उनी पाउछन।
कुनै समय चर्चाको शिखरमा रहदा पनि नेपाली संगीतबाट कन्दरा व्याण्ड केहि समय गुमनाम रहनुमा आफ्नो दोषमान्छन। कन्दरामा कहिले पनि मन मुटाव भएन। अब भने आफुहरू जोशका साथ पुरानो लयमा फर्कने वाचा कसे। साहित्यकारहरू सरू भक्त,विनोद गौचन,रमेश श्रेष्ठ, तीर्थ तामाङ, हरिशरण लामिछाने लगायत ब्याण्डका मेम्बर सुनिल थापाकोगीतहरूलाई प्रस्तुत गरिसकेक गायका गायक श्रेष्ठले आगामी एल्बमहरूमा पनि साहित्यकारहरू सँगै सहकार्य गरिने बताए। बुबा पनिसाहित्यकार रु बहाँको शब्दमा स्बर कहिले भर्ने भन्ने हाम्रो प्रश्नमा बुबाको शब्दमा स्वर भर्ने योजना रहेको बताए।
हाल कन्दरा समूहमा बुद्धराज बर्जाचार्य, सुनिल थापा, विवेक श्रेष्ठ ,अमित गुरुङ, असिम शेरचन, अविनाश गायक तथा अनिल गुरुङ संलग्नछन् भने हङकङ पोखरा, ‘तगारोमा रुमाल राखी’, ‘तिमी पारि’, ‘लेककी हे माया’, चन्द्रकोटकी नानी, फुलचोककीको डाँडैमा,भेडीगोठु, ‘चञ्चले कान्छी’ लगायतका गीतहरू चर्चित रहेका छन। नयाँ पुस्ताका युवा पिढीहरूलाई लक्षित गर्दै ‘डाँडा पारी’ लाई रिमेक भर्सनमा ल्याउदै गरेको बताउने उनीले कन्दरा समूहको सहयोग मैआफुले सोलो एल्बम पनि निकाल्ने तयारीमा रहेको बताए। 'भविष्यमा कन्दरा ब्याण्डले अमेरिकाको विभिन्न ठाँऊहरूमा लाईभ कन्सर्ट दिने' गायक श्रेष्ठले निकट बताए।
नियमित योगा गर्ने,खानपिनमा बिशेष ध्यान दिने र मदिरापानबाट टाढा रहेका यि गायकले आफैले आफुलाई अनुशासनमा बाँधेका रहेछन। उनी आफुले स्वर दिने गीतको शब्द र संगीतलाई बिशेष ध्यान दिन्छन। यसो त आफ्नै लेक,वेसी,डाँडापाखामा बोलिने मौलिक शब्दहरू भएकागीतहरू नै उनीलाई प्यारो लाग्दो रैछ। एक पटक साथीले आफ्नो प्रेमिकालाई भगाएर जन्ती जाँदा साथी सुनील थापाले बनाएको गीत डाँडापारी उनीलाई उत्कृष्ट लाग्ने गीत रहेछ। हामीसँगको कुराकानीमा पनि यहि गीत गुनगुनाए।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असार २४, २०७४, ०२:०४:००
अमेरिकाबाट गोविन्द केसीको प्राण बचाउ अभियानको थालनी
अमेरिकी राजनीतिमा नेपाली युवा
अमेरिका, रेशम बजगाईं र नेपाली समूदाय
अमेरिकाको भर्जिनियामा एक नेपालीको हत्या